सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरप्रमुख पौडेलको जवाफ यस्तो छ,
By vijayafm on	 January 22, 2019 नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट नगरपालिकाले मंगलबार १८ महिनापछि सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । दुई सय १९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । जसमध्ये करिब १ सय जना त जनप्रतिनिधि नै थिए होलान् । निकै न्यून सहभागिता रहेको सार्वजनि सुनुवाईमा अधिकांश नगरबासीले भाषण गर्दैमा नगर समृद्ध नहुने बताएका छन् । यसका लागि काम गर्न सुझाब दिएका छन् ।
भाषण र माला लगाएर गैँडाकोट समृद्ध बन्दैन – नगरबासी
नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले नगरबासीको प्रश्नको यसरी जवाफ दिनुभएको छ । नगरबासीका सुझाब र गुनासा दुबै जायज रहेको नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले बताउनुभयो ।
आचारसंहिता पालना गर्नेछौँ । प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
विषयगत रुपमा प्रगति विवरण बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने छु ।
गैँडाकोट ३ को हर्दिमा ३५ लाखको लागतमा बत्ति जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भोक्रोफाँटमा पनि छिट्टै हुनेछ । गँैडाकोट १८ मा पनि विद्युतिकरण कार्य सम्पन्न गर्ने छाँै ।
औद्योगिक फिडर लाइनको काम पुरानो हो । यो कामको लागि पहल गरिरहेको छु ।
भृकुटी कागज कारखाना नेपाल सरकारले २२ करोडमा विक्रि गरेको थियो । यसलाई राष्टिय करण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो सोच भएकाले यसकालागि उद्योग मन्त्रालयसंग समन्वय भइरहेको छ ।
डम्पीङ साइड अति महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको व्यवस्थापनका लागि प्रतिवद्ध छु ।
अन्तराष्ट्रिय खेलमैदानका सन्दर्भमा काम नापिको काम सकेर मात्र सरकारले बजेट छुट्याउने हुँदा त्यसको सम्पूर्णकाम लागि पहल गर्नेछु ।
गैँडाकोट नगरपालिकाले खर्च गर्न सकेन, ७९ लाख सरकारलाई फिर्ता
एउटै मञ्चमा भोली देखि नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुख देख्न सक्नुहुने छैन । यसको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
सुशासनको पाटोमा वाड देखि नगरले सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने छौँ ।
प्लटिङका सन्दर्भमा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमा अघि बढ्छाँै ।
नारायणी तटबन्धन, सरकारले गरेको भौगोलिक अध्ययनका आधारमा काम गर्ने छाँै । अन्य क्षेत्रमा सो काम नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
गैँडाको समस्याका सन्दर्भमा छलफल र अन्तक्रिया कार्यक्रम भइरहको छ । नियन्त्रणका लागि आवश्यक मेश जालीका लागि प्रदेश सरकारसंग प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा नेकपा र काँग्रेसलाई मात्र बोलाइएको आरोप
सहकारी ग्रामको विकास र सहकारीको प्रवर्धनका लागि सहकारीहरु सहकार्य गर्न तयार भए त्यस तर्फ सोच्न सकिने छ ।
बजेटको विनियोजन गर्दा जनसंख्याको आधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको र त्यसपछि भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।
पितौँजी अस्पताललाई नगर अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शंशाक कोइरालाले समेत यो योजना अघि सार्नुभएको छ । आवश्यक भएको खण्डमा यस कार्यलाई पनि नगरले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने छौँ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा नेकपा र काँग्रेसको धारणा
प्रश्न गर्न छुटेका कुरा
कालिगण्डकीको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम के भएको छ ?
सिटी बसमा वृद्धवृद्धालाई छुट दिने निर्णय गर्नुभयो । सम्भवत ः पहिलो निर्णय थियो ? त्यसको के कुरा थियो ?
केही प्रगति विवरण
दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा सिसि क्यामेरा जडान
गँैडाकोट १२–१४ जोड्ने ताँउ खोला पुलका लागि ९० लाख विनियोजनगरी काम
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि ३२ लाख ७५ हजार खर्च
खेती योग्य जमिनमा सिंचाइका लागि रु १ करोड विनियोजन गरी ५ वटा सिंचाई बोरिङ निर्माण । कहाँ कहाँ निर्माण गरिएको नाम उल्लेख नभएको
गैँडाकोट १ र गैँडाकोट ५ बालमैत्री वडाका लागि काम हुँदै
गँैडाकोट ५ पूर्ण सरसफाई उन्मुख वडा घोषणा
स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब परिक्षण सुरु
नगरभित्रका प्रति सुत्केरी आमालाई थप रु ३ हजार रकम सहयोगको थालनी